“Latinitas,” Mampavitrika Ny Tanora Latina Amin’ny Fampiasana Teknolojia · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Jea
Voadika ny 13 Novambra 2012 9:50 GMT
Vakio amin'ny teny English, Dansk, Español
Soa fa tsy nifarana hatreo ny hevitra tsara rehetra noresahana tany an-dakilasy. Tamin'ny taona 2002, nanomboka namorona gazetiboky mifantoka amin'ny traikefa ananan'ny tanora Latina i Laura Donnelly sy Alicia Rascó nianatra tao amin'ny Oniversiten'i Austin, Texas. Taorian'ny fahavitan'ny fianarana, nanohy nametraka fifandraisana matihanina ilaina amin'ny famoronana ilay fantatra amin'ny anarana hoe Latinitas izy ireo, fikambanana tsy mitady tombontsoa ara-barotra ao Etazonia izay voatokana hampavitrika ny tanora Latina 9 hatramin'ny 18 taona amin'ny fianarana sy ny fampiasana fampahalalam-baovao ary ny teknolojia . Mampiseho ny iray amin'ireo tetikasany ity lahatsary eto ambany ity.
Eny, mazava ho azy, avoaka hatrany amin'ny aterineto ny gazetiboky izay amin'ny anaran'ny fikambanana, miaraka amin'ireo mpandray anjara manoratra betsaka ao amin'ny votoaty. Ireto manaraka ireto ny asa soratra nataon'ireo tanora tamin'izany:
Tononkalo: Zarao amin'ireo Latinitas hafa ny tononkalonao.
OMG: Nieren-doza tamin'ny fotoan-tsarotra ve ianao? Ampahafantaro anay izay zava-nitranga ary ahoana ny fomba nahatafavoaka anao tamin'izany.
Rant & Rave: Misy zavatra tianao amboarina ve amin'ny nononao? Ampahafantaro anay. Te-handre ny hevitrao izahay.
Girl Talk (Resa-Jazavavy) : Valio ny fanontanianay isam-bolana ho an'ny tanora
Tamin'ny 6 Oktobra, tamim-pahombiazana lehibe no nanatontosan'ny Latinitas ny valandresaka voalohany. Hanne Vang
Nanatontosa ny konferansa voalohany isan-taona ny Latinitas tao Austin Texas. Nahazoan-dalana ny famoahana ny sary.
Hansen, mpamoaka lahatsoratra sy mpiandraikitra ny fifandraisan'ny mpikambana —ary koa mpandika teny ao amin'ny Global Voices—nanambara fa tovovavy maherin'ny 60 izay 9 hatramin'ny 15 taona no nandray anjara tamin'ny atrikasa nokarakaraina tao TechChica: fampahalalam-baovao/tambajotra, bilaogy sy ny podcast (fandraketa-peo), ary koa ny filazan-draharaha ho an'ny daholobe.
Hoy i Hanne nanazava:
Tamin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao isan-karazany, namorona fanentanana mikasika ny olana ara-tsosialy ao amin'ny fiarahamoniny ireo tovovavy, ny tanjona dia ny hametrahana fiovana ara-tsosialy. Anisan'ireo lohahevitra nosafidian'izy ireo tamin'izany: ny fitondrana vohoky ny tanora, ny fandrahonana, sy ny fanavakavahana ireo sembana. Lahatsary ahitana ny vokatra farany niaraka tamin'ny filazan-draharaha ho an'ny daholobe (PSA) tamin'izay naranty. Nandritra ny valandresaka, tsapanay sy hitanay ny fahatsiarovan-tenan'ireo tovovavy mikasika ny olana ara-tsosialy.
Araka ny nambaran'ilay mpitati-baovao Juan González:
Ny tombana fanisam-bahoaka 2050 no milaza fa taranaka Latina avokoa ny ampahatelon'ny olona monina ao Etazonia. Raha mitohy izany, angamba amin'ny fiafaran'ny taonjato 21, hilaza ny antsasaky ny mponina ao amin'ity firenena ity fa tsy Eoropa no fiavian'izy ireo fa Amerika Latina.
Mahabe fanantenana ny fanohanan'ny Latinitas ny fanamafisana ny feon'ny tanora Latina, izay ho mpitantana antsika amin'ny hoavy. Fantatr'ity fikambanana tanora marani-tsaina sy tia karokaroka ity tsara fa na dia eo aza ny fitsaratsarana an-tendrony sy ny fanenjehana, ny fanohizana ny tolona mba hanatanteraka ny nofinofin'ny tsirairay ihany no ahitam-pahombiazana.